Taariikh Nololeedka Katherine Dhanani iyo Sooyaalka Xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka – Goobjoog News
Katherine Simonds Dhanani oo 24-kii February 2015-ka uu Madaxweynaha Mareykanka Obama u magacaabay safiirka Maraykanka u fadhin doona dalkeena Soomaaliya ayaa lagala laabtay warqadihii Safiirnimo.
Tilaabadan ayaa timid kadib booqashadii John Kery uu Muqdishu safar ku yimid May 5, 2015-kii, Lama oga saameynta uu safarkaas ku lahaa gabadhan shaqada laga ceyriyay, lakin waxaa la hubaa in aanay ku wehlin booqashadii Kerry ee Muqdishu.
Waa Tuma Katherine Simonds Dhanani
2010-2013: Dhanani waxaa ay lataliye guud ka noqotay Qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Hydrabat ee dalka Hindiya.
Intii u dhaxaysay sanadihii 2007-2010: Dhanani waxaay ay safaaradda Mareykanka ee Harare, Zimbabwe ka ahayd ku xigeenka Madaxa Howl-galada.
2005-2007: Katherine Simonds waxaa ay noqotay kuxigeenka Madaxa Howl-galada. Safaaradda ay Mareykanka ku leeyihiin Libreville, Gabon .
2002-2005: Dhanani waxaa ay madax ka aheyd waaxda Siyaasadda iyo Dhaqaalaha ee Safaaradda Mareykanka ee Lusaka, Zambia
1999-2002: Katherine Simonds waxaay ay Madax ka aheyd qeybta dhaqaalaha ee Safaaradda Mareykanka ee Kinshasa, dalka Democratic Republic of the Congo.
1998-1999: Katherine ayaa waxaa ay madax ka aheyd xafiiska dhaqaalaha ee Safaaradda Mareykanka ee Mexico City, Mexico.
1996-1998: Waxaa ay ka shaqeyn jirtay waaxda arimaha dibadda qeybteeda arimaha Mexico.
Muddo sii horeysay waxaa ay kaaliye ka noqotay xafiiska Amuuraha Qaaradda Ameerika Ka Dhaxeeya ee wasaaradda arrimaha dibadda.
Katherine Simonds waxaa ay sidoo kale kasoo shaqeysay Qunsuliyadda Mareykanka ee Brazzaville, Republic of the Congo iyo xafiiska dhaqaalaha ee Safaaradda Mareykanka ee Georgetown, Guyana.
Shaqooyinka ay soo qabatay waxaa ka mid ah caawiye ay ka noqtay magaalada Sacramento ee California iyadoo sidoo kale Bare ka noqotay Grinnell College ee gobolka Iowa (ayowa) ee dalka Maraykanka .
Katherine Simonds Dhanani waxaa ay Jaamacadda heerka koobaad B.A ku qaadatay Jaamacadda Kenyon College halka ay Jaamacadda heerka labaad ka diyaarisay Massachusetts Institute of Technology.
Heerarka Xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka:
Bishii Janaayo 17-keedii, 2013: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa safar ku tagay dalka Mareykanka xiligaasi oo dowladda Maraykanka ay sheegtey in markii ugu horeysey ay aqoonsatay dowlad Soomaaliyeed oo rasmi ah oo Soomaaliya ka jirta.
Bishii February 24, 2015, Obama ayaa safiir u magacaabay Katherine Simonds Dhanani Katherine Simonds Dhanani, Haweeneydan oo horay uga tirsaneyd shaqaalaha Wasaaradda arimaha dibadda Mareykanka, Kooxda la taliyaasha, iyadoo agaasime ka noqotay Xafiiska Arimaha nabadgalyada ee wasaaradda arimaha dibadda qeybteeda Afrika, xilkaas oo ay heysay laga soo bilaabo 2013-ka.
Dowladda ayaa Soomaaliya ayaa May 5, 2015-kii u balanqaaday Mareykanka dhul KMG si safaarad uga dhigtaan, Mareykanka oo haatan safaaradooda ku taalo dalka Kenya.
Wabiga Shabelle Oo Ku Fatahay Deegaanno Ka Mid Ah Shabellaha Hoose